.: သောက ကင်းဝေးနေနိုင်ရေး
အခုရက်ပိုင်း ၀ိုင်း အားလပ်ချိန်မှာ ဖတ်ဖြစ်နေတဲ့ ဆရာကြီးတက်တိုး(1913-2003)ရဲ့ သောကကင်းဝေး နေနိုင်ရေးစာအုပ်လေးပါ။ မူရင်းရေးသားသူ Dale Carnegie ဒေးလ်ကာနေဂျီ - How to stop Worrying and start living စာအုပ်မှ ထဲကနေ ဆရာကြီးရဲ့ ဘာသာပြန်ချက်များ တချို့တ၀က်ကို ပြန်လည် မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွင် ယနေ့အလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားပြီး ကောင်းမွန်အောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်ခြင်းသည် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ နက်ဖြန်အတွက် စဉ်းစားပါ။ သို့သော်နက်ဖြန်အတွက် ကြို၍မပူပန်ပါနှင့်။ နက်ဖြန်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပြုပါ။ သို့သော် နက်ဖြန်ဘာများဖြစ်ပါသလဲ ဟု တွေးတော ကြောင့်ကြခြင်း မရှိပါနှင့်။
အင်္ဂလိပ်သဘာဝစာရေးဆရာကြီး ဂျွန်ရပ်စကင်းသည် စားပွဲပေါ်တွင် ကျောက်တုံးတစ်ခုရှိရာ ထိုကျောက်တုံးပေါ်၌ စာလုံးတစ်လုံးတည်းထွင်းထားသည်။ ထိုစာလုံးကား " ယနေ့ " ဟူ၏။
သင်သည် ပြဿနာတစ်ခုခု ပေါ်လာလျှင် မရှူနိုင် မကယ်နိုင်ဖြစ်ပြီး သောကမပွေပါနှင့်။ ဤနတ်ဆေးကို အသုံးပြုပါလေ။
၁။ ဒီကိစ္စမှာ ငါ ဘယ်အခြေအနေအထိ ရောက်မလဲဟု အဆိုးဆုံးအခြေကိုတွက်ကြည့်ပါ။
၂။ ထို အဆိုးဆုံး အခြေအနေကို လက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
၃။ အဆိုးဆုံး အခြေအနေကို လက်ခံပြီး ထိုအခြေအနေမှစ၍ တိုးတက်လာအောင် စိတ်အေးအေးနှင့် ကြံစည်စဉ်းစားပါ။
(၃) သောက၏ ဆိုးကျိုးများ
" သောကကိုမျှ မတိုက်ခိုက်တတ်သော လုပ်ငန်းရှင်များသည် အရွယ်ငယ်ငယ်နှင့်ပင် သေဆုံးကြရပေမည် "
ဒေါက်တာ အဲလက် ကယ်ရယ်
အောက်ပါအကြောင်းများကြောင့် သွက်ချာပါဒ ဖြစ်တတ်သည်။
၂။ စီးပွါးရေး ပျက်စီးခြင်း
၃။ အဖော်သဟဲ မရှိခြင်း
၄။ အငြိုးစိတ် မွေးမြူထားခြင်း
၅။ သောက ထွေပြားခြင်း စသည်တို့သည် စိတ်နှင့်ဆိုင်သော သောကမှ ဖြာထွက်လာသော အကြောင်းများဖြစ်သည်။
သောကကြောင့် သွားကျိုးလွယ်သည်ကို သတိပြုမိကြပါသလား။ မဆီမဆိုင် သောကများတာနဲ့ သွားကျိုးလွယ်တယ်၊ မဖြစ်နိုင်ကောင်းဟု ဆိုကောင်းဆိုပါမည်။ သွားဘက်ဆိုင်ရာ နာမည်ကျော် ဒေါက်တာ မက္ကဂေါနီဂီက သောက ထွေပြားမှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကြောက်စိတ်ကြောင့်လည်းကောင်း သွားတွင်ရှိသော ကယ်လ်စီယမ်ဓါတ် (ထုံးဓါတ်) မှာ ပျက်စီးချို့ယွင်းကာ နောက်ဆုံး၌ သွားများ ကျိုးပဲ့ပျက်စီးတတ်သည်ဟု သွားစိုက်ဆရာဝန်များ အစည်းအရုံးတွင် မိန့်ဆိုဖူးသည်။ ထို့ပြင်ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦး၏ ဆေးခန်းနံရံတွင် ချိတ်ဆွဲထားသော ကတ်ပြား၌ ရေးထားသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်လည်း ကူးယူခဲ့ပါသေးသည်။ ဖတ်ကြည့်ပါဦးနော်...
ကိုယ်အညောင်း၊ စိတ်အညောင်းဖြေနည်းမှာ ဘာသာတရား၊ အအိပ်၊ တူရိယာနှင့် ရယ်ရွှင်မှုပင်ဖြစ်သည်။
ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းပါ စိတ်သက်သာမှုရသည်။ ကောင်းကောင်းအိပ်စက် အနားယူပါ ကိုယ်ကျန်းမာမှုရသည်။ ငြိမ့်ညောင်းချိုသာသော တူရိယာသံကို နားဆင်ပါ ။ ဘယ်အရာတွင်မဆို ရယ်မောနိုင်စရာအကွက်ကိုရှာပါ။ ဤနည်းကို လိုက်နာသူများ ကျန်းမာပျော်ရွှင်မှုကို ရလိမ့်မည်။
(၄) သောက ပြဿနာကို ဘယ်သို့စစ်ဆေးပြီး ဘယ်ပုံ ဖြေရှင်းမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဆရာ (၆) ဦးရှိပါသည်။ သူတို့သည် ကျွန်ုပ်အား ပညာ အလုံးစုံ သင်ပြသည်။ သူတို့အမည်ကား-
၁။ ဘယ်ဟာ၊ ၂။ ဘာကြောင့်၊ ၃။ ဘယ်သောအခါ၊ ၄။ ဘယ်သူ၊ ၅။ ဘယ်လို၊ ၆။ ဘယ်မှာ တို့ပင်ဖြစ်သည်။
ဘယ်ကိစ္စမျိုးမဆို ချတွက်ပြီး အပြီးအပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာ အကောင်းဆုံးပဲ သောကကို ဟောတဲ့ လမ်းလေးသွယ်နဲ့ ထိုးစစ်ဆင်ပြီး ချေမှုန်းပစ်လိုက်တာပဲ
ပထမလမ်း - ဖြစ်နေတဲ့ သောကနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းကို အတိအကျရေးချတယ်
ဒုတိယလမ်း - ဒါဆို ငါဘာတတ်နိုင်သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်း အဖြေကို ရေးချတယ်
တတိယလမ်း - လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေထဲက ဘယ်နည်းက လိုက်မယ်ဆိုတာ အသေအချာစဉ်းစားပြီး ပိုင်းဖြတ်လိုက်တယ်
စတုတ္ထလမ်း - ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နည်းအတိုင်း အမြန်ဆုံး လုပ်တော့တာပဲ
(၅) သင့်အလုပ်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သောကကို တ၀က်ဖြတ်ပစ်နည်း
၂။ အကြောင်းများကို စိစစ်ဝေဖန်ပြီါ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ
၃။ သေသေချာချာ ပြင်ဆင်ပြီး ချမှတ်လိုက်သော ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။
၄။ အလုပ်ကိစ္စနှင့်စပ်လျင်း၍ သောကထွေပြားလာလျှင် အောက်ပါ မေးခွန်းများ ရေးဖြေကြည့်ပါ။
၂။ ပြဿနာအကြောင်းရင်းက ဘာလဲ
၃။ ဖြေရှင်းနည်း ဘယ်နှစ်မျိုးရှိသလဲ
၄။ ဘယ်နည်းက အကောင်းဆုံးလဲ
(၆) သောကကို သင့်စိတ်ထဲက တွန်းထုတ်နည်း
" စိတ်မချမ်းမြေ့ရခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ သင့်ကိုယ်သင် ပျော်မပျော် စစ်ဆေးနေဖို့ အချိန်ပိုရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချိန်ပိုဟူ၍ မထားပါနှင့် "
အလုပ်ကို မအားအောင်လုပ်ပါ။ အချိန်ပိုမထားပါနှင့်။ သောကရှင်သည် အလုပ်ထဲတွင် စိတ်ကို စုံးစုံးမြုပ်အောင် ၀င်စားအပ်လှသည်။ သို့မဟုတ်ပါက သောက မွှေ၍ ကြေမွသွားချေမည်။
(၇) နောက်ချေးပိုးတွေက သင့်ကို မလှဲစေနဲ့
ဆိုလိုသည်မှာ အသေးအဖွဲကိစ္စတွေကြောင့် သောကအဖြစ်မခံဘဲ အာရုံပြောင်း၍ နေတတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဂရုမထားလောက်သည့် အသေးအဖွဲကိစ္စများကို အကြောင်းပြ၍ ဒုက္ခ အရောက်မခံပါနှင့်
" အသက်တာသည် တိုတောင်းလှသဖြင့် အသေးအဖွဲများကို အရေးမပေးနိုင်ဟူတေသာ စကားရပ်များကို မမေ့ပါနှင့် "
(၈) သင့်သောကများကို ပစ်ပယ်မည်းနည်းဥပဒေ
အကြောင်းအကျိုး စုံစမ်းကြည့်သေးတာပေါ့ ဟူ၍ အမြဲစုံစမ်းပါ။ ထို့နောက် ပျမ်းမျှခြင်း သဘောတရားအတိုင်း ဆိုလျှင် ငါစိုးရိမ်နေတာ ဖြစ်ဖို့ နည်းသလား၊ များသလား ဟု မေးကြည့်ပါ။
(၉) ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကောင်းချည်းပဲ
မဖြစ်နိုင်သည်ကို ဖြစ်နိုင်ရမည်ဟူသော သဘောနှင့် ဇွတ်တိုးလုပ်လျှင် လုပ်နိုင်သော သတ္တိအင်အား လူ၏သန္တာန်၌ မရှိသဖြင့် မဖြစ်နိုင်ချေ။ ဖြစ်နိုင်သည့်တိုင်အောင် ရှိသမျှ အင်အားကို ကုန်ခန်းအောင် အသုံးပြုရမည် ဖြစ်သဖြင့် အခြား ဘ၀ ကိစ္စများအတွက် သုံးစရာ အင်အားစု မရှိတော့ဘဲ နေခေမည်။ ဥပမာ လေမုန်တိုင်းနှင့် အလိုက်သင့် ယမ်းလိုက်သော ပဲ့ပြားသည် ကျိုးပဲ့ ပျက်စီးခြင်းမရှိပေ။ ကြံ့ကြံ့ခံနေသော သစ်ပင်ကြီးသည်ကား နောက်ဆုံး၌ လေမုန်တိုင်းဒဏ်ကို မခံနိုင်ဘဲ ခါးလယ်မှ ကျိုးကျရလေတော့သည်။
"မတတ်နိုင်လျှင် ပျော်ပျော်လက်ခံ" ဟု ဂရိပညာရှိကြီး ဆိုကရေတီးက ဆိုသည်။ ဤ ဆိုသောစကားအတိုင်းသာ ပြုကျင့်နိုင်ပါက ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သောကများသည် တ၀က်မက ပျောက်ကွယ်သွားကြပေလိမ့်မည်။
(၁၀) သင့်သောကကို ကန့်သတ်လိုက်ပါ
သောကက သင့်ကို မချေမှုန်းမီ၊ သင်က သောကဖြစ်စေတတ်သော အလေ့ကို ချေမှုန်းလိုက်စမ်းပါ။ ထို့ကြောင့် သောကဖြစ်မည်ဆိုလျှင် အောက်ပါမေးခွန်းများကို မေးကြည့်ပါ။
၁။ ယခုသောကဖြစ်နေသည့် အကြောင်းအရာသည် မိမိအတွက် မည်မျှ တန်ဖိုးရှိသနည်း ?
၂။ သောကကို မည်သည့်နေရာတွင် ကန့်သတ်ပြီး မေ့ပျောက်လိုက်ရမည်နည်း ?
၃။ သောက မပိုသင့်ပါလျက်နှင့် ပိုနေသလား ?
ဒီအချက် (၁၀)ချက်ထဲမှာ တစ်ချက်ချင်းဆီကို နောက်ထပ် အသေးစိတ် ဥပမာ သာဓကများနှင့် အကျယ်တ၀င့် ရှင်းပြထားတာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဆက်လက် ဖတ်ချင်သေးတယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ဒေါင်းလုပ် လုပ်လို့ရပါတယ်။ စာဖတ်သူများ အထက်ပါ အချက်တွေကိုဖတ်ပြီး မိမိတို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်း လုပ်ငန်းထဲမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ သောကတွေကနေ အားလုံး အမြန်ဆုံး ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။
Posted by Waing at 12/18/2009 10:00:00 PM
print ထုတ်ပြီးယူသွားတယ်နော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စာတပိုဒ်ချင်းစီအလိုက် သေသေချာချာ လေ့လာ လိုက်နာနိင်ရင် တကယ်အကျိုးရှိစေ နိင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တော့ ဘယ်လို အဆိုးနဲ့ပဲ ကြုံလာစေ အကြာကြီး စိတ်မပျက်အောင် သတိထား နေဖြစ်တယ်။ တခုခုဆုံးရှုံးရင်လည်း ဝမ်းမနည်း ဖြစ်ဘူး။ ဆုံးရှုံးတာကို နောင်တရနေရင် ၂ခါ ရှုံး တယ်လို့ပဲ သတ်မှတ်ထားတယ်။ ကိုယ်မစွမ်းဆောင်နိင်လွန်းရင်လည်း တခါပဲ အရှုံးခံလိုက်တယ်။ ဒီ့ပြင်ကိစ္စတွေမှာ ပြန်နိင် နိင်တာပဲ မဟုတ်လား။
စာဖတ်သူတွေအတွက် မှတ်သားစရာ အပြည့်နဲ့ မို့လို့ပါ။
ကျနော်ကတော့ ဘာပဲ ကြုံကြုံ ပြုံးပြုံးလေးပဲ နေနိုင်အောင် ကြိုးစားပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ စိတ်ပျက်ငြီးငြူပြီး ငိုနေလို့ ပြဿာနာက ပြီးသွားမှာမှ မဟုတ်တာ။
စာလေးတွေ တန်ဖိုးရှိပါတယ် မသိသေးတဲ့ ကျနော်အတွက် စိတ်ခွန်အား တခုပါပဲဗျာ။
သောကက ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာသည် ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လောက် တန်ဖိုးရှိသလည်း ဆိုတာ တော်၂ အဓိကကျပါတယ်..
စာအမြည်းနဲ့တင်အတော်ကောင်းမှတ်းသိလို့ ဒေါင်းယူသွားတယ်။ အသေအချာဖတ်လို့ရအောင်။